Ubekhonze amancoko uMadisha - Ilanga News
Home Izindaba Ubekhonze amancoko uMadisha
Ubekhonze amancoko uMadisha
Kuthiwa ubezimisela, efika kuqala njalo ejimini
LISHONE elayizolo engena elakanyana amazwi enduduzo kwiMamelodi Sundowns ngokudlula emhlabeni kwesitobha sayo, uMotjeka Madisha oshone engozini yemoto.
UVEZE okungajwayelekile obekwenziwa nguMotjeka Madisha (25) obeyisitobha seMamelodi Sundowns umqeqeshi weBafana Bafana, uMolefi Ntseki, okhale ngokuthi ushayeke kakhulu ngokudlula kwalo mdlali engozini yemoto eyenzeke ngabo-02h00 emgwaqweni uZuurfontein, eKempton Park, okuyikhaya lekilabhu yakhe.
Imoto ebihamba uMadisha nomngani wakhe ishe yangqongqa kanti abe-Ekurhuleni Emergency Services, bakuqinisekisile ukudlula kwemiphefumulo emibili kule ngozi yonyanyavu lwakwaBMW.
Kuthiwa omunye wabangani bakaMadisha ushe wangqongqa kanti yena uzamile ukuphuma emotweni, kodwa kwamenela esengaphandle kwayo.
Kuvela ukuthi lo mdlali wehlelwa yile ngozi nje, ubephuma komunye umcimbi njengoba ubengekho komkhulu wedowns wokugubha iminyaka ewu-50 yabakhona obuwenziwe nguPatrice Motsepe, eSandton Convention Centre kusihlwa.
Lo mcimbi weDowns ubuhanjelwe nayizingwazi zikanobhutshuzwayo, kukhona ngisho nezase-Afrika okubalwa kuzo uSamuel Eto’o waseCameroon wodumo kwiBarcelona yaseSpain noSiaka Tienne wase-Ivory Coast, owake wagijima kuyona iSundowns.
Ekhuluma neLANGA uNtseki, uzwakalise ubuhlungu abuzwayo ngokushona kwalo mdlali athi ubeyisibonelo esihle kakhulu kubadlali beBafana Bafana ngoba ubengomunye wabadlali abebefika kuqala ejimini uma bezivocavoca, okuyinto engajwayelekile kubadlali abasebancane.
Uthe lokhu kukodwa, bekukhombisa ukuthi ungumuntu owuthandayo umsebenzi wakhe.
“Kuyashaqisa kakhulu ukuthi umdlali osakhula ebengibheke lukhulu kuyena, ashone ngale ndlela.
“Kabavamile abadlali abawuhlobo lukaMadisha, ubengumfana obehlale njalo ethanda ukuzincokolela, efika ngesikhathi ejimini aphinde abe ngumdlali wokugcina ukuhamba endaweni lapho besijima khona. Bengisabheke lukhulu kuyena,” kusho uNtseki.
Uthi uMadisha waba ngomunye wabadlali ababa nenhlanhla enkulu yokudlula cishe kuzona zonke izigaba zikanobhutshuzwayo ezinhlakeni zeSouth Africa Football Association (Safa).
“Yisikhathi esibi kakhulu emkhakheni kanobhutshuzwayo. Emndenini nekilabhu yakhe iMamelodi Sundowns, sengathi bangaduduzeka ngalesi sikhathi esinzima kangaka.
“Wonakele umphefumulo wami. Namanje ngisathukile ngakho konke.
“Ngiyethemba ukuthi umoya wakhe uzokuba yidlozi elihle kwiBafana Bafana ukuya phambili,” kusho yena.
UDanny Jordaan ongumengameli weSafa, uhambe emazwini kaNtseki, wathi uphelelwe ngamazwi ngokudlula kukaMadisha.
Ngesikhathi ekhuluma naleli phephandaba izolo, uthe usazama ukuthola ukuthi ngabe kwenzekeni ngempela kulo mdlali.
Uthe kuyizindaba ezimbi kakhulu ukuhamba komuntu osemncane obekusabhekwe lukhulu kuyena.UShupi Nkgadima ongumxhumanisi wale kilabhu nabezindaba, uzwakalise ukudabuka kodwa wathi beyiDowns basazokhipha isitatimende esigcwele ngalolu daba.
ILANGA lizamile nokuthinta u-Alex “Goldfingers” Shakoane weDowns ocele ukuba libuye limthinte ngoba kusenzima ukukhuluma.
I-Premier Soccer League (PSL) ithumele isitatimende, izwakalisa ukuzwelana nabadlali nezikhulu nabaphathi beSundowns ngokuhamba kwalo mdlali.
UMadisha wajoyina iSundowns ngo-2015 esuka kwiHighlands Park ayeyijoyine esuka kwiM Tigers yaseTembisa.
Unqobe isicoco seligi se-ABSA Premiership amahlandla amathathu ngo-2017 no-2020 neDowns.
Udlale kwiBafana Bafana amahlandla awu-13 wayishayela igoli elilodwa ibhuquzisa iBotswana ngo-3-0 koweCosafa Cup ngo-2018 ePeter Mokaba Stadium.
Kuzokhumbuleka ukuthi lo mdlali uke waba nyamanambana kwabanye abalandeli beSundowns, abebemsola ngokushaya udaka kodwa wesekwa ngumqeqeshi wakhe waphambilini, uPitso “Jingles” Mosimane.
UMadisha uhamba nje, ulandela uzakwabo u-Anele Ngcongca obefihlwa ngeledlule naye owashona engozini yemoto.
Abanye abadlali bakanobhutshuzwayo wezinga elikhokhelayo kuleli abadlula ezingozini kubalwa uGift Leremi (Sundows), Lesley Manyathela (Orlando Pirates), Conrad Hendricks (Moroka Swallows), Oscar Ntwagae (owayezilolonga neJomo Cosmos), Richard Henyekane (Free State Stars), Cecil Lolo (Ajax Cape Town), Mondli Cele (Maritzburg Unted) ukubala abambalwa.
Previous articleUshise isoka nendlu engafuni ukwaliwa
Next articleBadidekile kuvalwa umcimbi kuneminxa engamenyezelwe